Daawo Sawirro: Maxaadan Ogeyn oo Qunsulka Safaaradda Soomaliya ee Dalka kenya uu gaarsiiyay Maxaabiis Soomaliyeed ee Ku jira Xabsiyada Wadanka….. | Kismaayo24 News Agency
Daawo Sawirro: Maxaadan Ogeyn oo Qunsulka Safaaradda Soomaliya ee Dalka kenya uu gaarsiiyay Maxaabiis Soomaliyeed ee Ku jira Xabsiyada Wadanka…..
Monday October 31, 2016 - 7:56 under Somali News by Tifaftiraha K24
Qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya ayaa maanta deeq isugu jirta dhar iyo tikidho gaarsiiyay maxaabiis Soomaaliyeed oo dhameystay xabsiyo u dhaxeeya 9 ilaa iyo 8 sano.
Maxaabiistan oo tiradoodu ay gaarayso ilaa 7 dhallinyaro Soomaali ah ayaa dhameystay xabsiyo u dhaxeeya 9 ilaa iyo 8 sano, kaddib markii lagu eedeeyay falal burcadbadeednimo ah.
Qaar ka mid ah maxaabiista oo maalinta berri ah dib ugu soo laabanayo Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay deeqdan isugu jirtay dhar, tikidho iyo waraaqaha loo yaqaano “Go home” ka oo xabsi ku yaalla duleedka magaalada Nairobi uu maanta ugu geeyay qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya Cali Maxamed Sheekh (Cali Bagadi).
“Waxaan aad u soo dhoweyneynaa deeqdan uu maanta noo keenay qunsulkeena Cali Bagadi, sidoo kale safiir Jamaal iyo dhammaan shaqaalaha safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya oo aad noo caawin jiray intii aan xabsiga ku jirnay oo maanta oo u dambeysay noo keenay waxyaabihii aan gacan qabsi ka dhigan laheyn marka aan tagno dalkeena”ayay yiraahdeen qaar kamid ah maxaabiista xukunnada dhameystay.
Qunsulka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya Cali Maxamed Sheekh (Cali Bagadi) oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ka safaarad ahaan ay had iyo goor diyaar u yihiin caawinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku dhibaataysan wadankan Kenya.
“Walaalayaal sida aad la socotaan 20 cisho ka hor waxaan xabsiga Kimiti ee duleedka magaalada Nairobi aan ku booqanay oo aan ka sii deynay muwaadiniin Soomaaliyeed oo xabsiyo dhameystay, maantana waxaan soo booqanay kuwo kale oo maalinta berri ah dib ugu laaban doono dalka Soomaaliya kaddib markii ay dhameysteen xabsiyadooda, Waxaan u keenay dhar, tikidho iyo go home yo” ayuu yiri Cali Bagadi.